” ဒီမှာလေ တက်တယ် တက်တယ် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ” ဒီမှာလေ တက်တယ် တက်တယ် “	16
” ဒီမှာလေ တက်တယ် တက်တယ် “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jun 20, 2015 in Creative Writing, Poetry | 16 comments
“ဒီမှာလေ တက် တယ် တက်တယ် ”
ဆန် တွေ ဆီတွေ
” ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအားပေးပါ ”
ဒီမှာလေ တက်တယ် တက်တယ်
တက်တယ် တက်တယ် ရှင့်
၂၈- ၃ -၂၀၁၅
တောင်ပေါ်သား says: သားသားတို့ကတော့ ကျတယ် ကျတယ် ကျတယ်ကျတယ်ဗျ ၊ ( စိတ်ဓါတ် )
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပြောင်းပြန် အချိုးကျ
kai says: သူတို့ပျော်ရ/မပျော်ရ..
မြစပဲရိုး says: ကပေါက်ကြီး
. စေတနာ နဲနဲ မှ မပါဘဲ ကိုယ့် အတွက် အာဏာကို ဆုပ်ထားကြတဲ့ ဖွတ် ဘီလူးတွေ က မင်းသားလို ဘယ်လို ဆက်ပြီး မျက်နှာပြောင် တိုက် ကြဦးမယ် ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။
နဲနဲလေးမှ တောင် အရှက်မရှိတဲ့ မျက်ခွက်ကြီး တွေ နဲ့ လူကြားထဲ မနေရဲ တဲ့ သူတွေ ကို ထိပ်ပိုင်းနေရာ က ဖယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ NLD ကို မဲ ဝိုင်းပေးဖို့ဘဲ ရှိတယ်။
ဟို တစ်ခါ အဘနီ ပြောတာလေး သတိရ မိတယ်။
ဖွတ် ကို မပေးဘဲ ခွေး ကို တောင် အမြီးဖြတ်ပေးမယ် ဆိုတာ။
အဲဒီလို မဖြစ်အောင် ခွေး တွေကို ပေးစရာမလိုအောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တကယ် ကို တော်တဲ့ ပြည်သူ ကို တကယ်စေတနာထားနိုင်မဲ့ သူ တွေ ကို ရွေးဖို့ လုပ်နေတယ် ထင်ရဲ့။
အဲဒါကို လက်ရှိ ပါတီတွင်းလူများ အနေနဲ့သဘောထားကြီးပြီး သဘောပေါက်သင့်တယ်။
အားလုံးညီ ရင် တက်သင့်တာတွေ တက်ပြီး ကျသင့်တာတွေ ကျ သွားမှာပါ။
သူတို့ပါတီကတော့ ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ တိုင်းပြည်အောင်နိုင်ရေးကို အဓိကထား စဉ်းစားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် NLD ပါတီဝင်မဟုတ်တဲ့ အပြင်က တကယ်တော်တဲ့သူတွေကိုလည်း အမတ်လောင်းအဖြစ် ဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
NLD အမတ်လောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်မှု အကုန်ချပြရမယ်…….
NLD ပါတီကနေ ဝင်ရောက်အရွေးခံမယ့် လွှတ်တော်အမတ်လောင်းတွေဟာ ကာယကံရှင်နဲ့ ခင်ပွန်းဇနီးသည်တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ၁၈နှစ်အောက် သားသမီးတွေရဲ့ နာမည်နဲ့ရှိတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအပါအဝင် ဘဏ်စာရင်းတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြရမယ်လို့ ၂ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်ဟာ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်ရတာဆိုတာ အမတ်လောင်းတွေ သိဖို့လိုပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုအပြောင်းအလဲတွေရှိလာလို့ NLD ပါတီက စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ပူးပေါင်းပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ကတိလက်မှတ် ရေးထိုးရမှာဖြစ်ပြီး အမတ်လောင်းကိုတော့ တကယ်တော်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့သူကိုသာ ရွေးမယ်လို့ ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ၅ကြိမ်မြောက် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီမှာ ဇွန်လ ၂ဝနဲ့ ၂၁ရက်တွေမှာ ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီး ပါတီဥက္ကဌက အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
အချို့တွေက ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး အမတ်လောင်းရွေးကြပေမယ့် သူတို့ပါတီကတော့ ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ တိုင်းပြည်အောင်နိုင်ရေးကို အဓိကထား စဉ်းစားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် NLD ပါတီဝင်မဟုတ်တဲ့ အပြင်က တကယ်တော်တဲ့သူတွေကိုလည်း အမတ်လောင်းအဖြစ် ဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကာလ တည်ငြိမ်မှုအရေးကြီးတာမို့ မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ လမ်းကြောင်းပြောင်းတာမျိုး မဖြစ်စေချင်တဲ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး ပြည်သူ့မျှော်လင့်ချက်ကို ထုဆစ်ချင်ပါတယ်လို့ လူထုခေါင်းဆောင်က ဆိုပါတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်တို့ ဘယ်သူ့ကိုရွေးမယ်ဆိုတာ အလိုလိုသိနေကြပါတယ် ကိုလတ်ကြီး
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ငွေကြေးဖောင်းပွတာကို စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရဲ့ သင်္ကေတလို့ ပြောရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
kai says: inflation ငွေကြေးဖောင်းပွ..
အဲဒါတွေအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရာမှာ.. မြန်မာတွေအတွက်.. စာအုပ်ကြီးအတိုင်းမရဘူးလို့ထင်မိတယ်…
အသေးဆုံး.. အပ်ကနေ… အကြီးဆုံး လေယဉ်ပျံအထိ.. နိုင်ငံခြားကသွင်း/သုံးကြတာကိုး….
တိုင်းပြည်ကိုယ်ပိုင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရယ်လို့.. လောက်လောက်လားလား.. ဘာမှမရှိ..။
ဘိန်းရယ်..။ သယံဇာတရယ်… ကအဓိက…။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ တရုပ် တစ်ယွမ်ကို မြန်မာငွေ ၁၆၅ကျပ်နဲ့လဲရတယ်။
ကျယ်ခေါင်မှာ ခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲ ၆ယွမ်
မပြုံးရေ မြန်မာငွေက ပမာဏများလာပေမယ့် တန်ဘိုးကျသွားတာပါ
Alinsett @ Maung Thura says: တက်စာတွေချည်း..စားနေကြရတယ်…
ပလို့ တွေတော့ ဂျိ ကုန်တော့မှာပဲ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2395
aye.kk says: 1962 ခုနှစ်ဆိုတာ
အဖေသေပျော်ပြီဆိုပြီးလောကကြီးကို အပြုံးနဲ့ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွါသွားနိုင်ခဲ့တယ် ။
2015ဆိုတဲ့ခုနှစ်မှာကိုယ့်အနေနဲ့ က အတုအတုတွေကျဆုံးတာကို အမြင်ချင်ဆုံးဖြစ်မိတယ်။
အစစ်တွေ အစစ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ခံစားပြီး မြင့်တက်လာမဲ့ လူနေမှုဘဝတစ်ခုကို ရရှိခံစားချင်မိပါတယ်။။။
aye.kk says: 1986ခုနှစ်အစား 1988ခုနှစ်လို့ပြင်ဖတ်ပေးပါ။။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မမအေးရေ ရှင်ကြီးက ကျားထက် ပိုဆိုးသွားပါကြောင်း
Mike says: .တက်…တက်…တက်…အတက်တွေထဲ….သွေးတက် မသွားဖို့ကရုစိုက်နေရသဗျို့ 
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အစားစားနေရင်း ဈေးနူန်းပြန်တွက်ရင်
အောင် မိုးသူ says: တက်တယ် တက်တယ် တက်တယ် ကုန်ဈေးနှုန်း
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တက်စာမ စား ဘဲ နေကြရအောင် အောင်မိုးသူရေ